Farmaajo: Sanad iyo bar ka hor ma jirin cid ka hadleysa wadaniyad, waa la baqayay - Caasimada Online
Home Warar Farmaajo: Sanad iyo bar ka hor ma jirin cid ka hadleysa wadaniyad,...
Farmaajo: Sanad iyo bar ka hor ma jirin cid ka hadleysa wadaniyad, waa la baqayay
Muqdisho (Caasimadda Online )_ Madaxweynaha dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa sheegay in sanad iyo bar ka hor aanay jirin cid ka hadleysay Wadaniyad, isla markaana laga baqayay, kaddib khudbad uu ka jeediyay Munaasabadda 26-ka June oo ku beegan 58-guuradii ka soo wareegatay markii Xoriyadda ay qaateen Gobollada Waqooyi.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmajo ayaa sheegay in manta la joogo xilligii la qadan lahaa Mabda’a dhabta ah ee Wadaniyada.
“Maanta waxay taagan tahay in sidhab ah looga Shaqeeyo Wadaniyadda,waayo dalkan ayaa ku hormarayo,waxaa hubaal ah in Halsano iyo bar ka hor dalkan in aysan jirin cid ka hadleysay Wadaniyad,waayo dadku wey baqi jireyn ayuu yiri madaxweynaha.
Madaxweyen Farmaajo ayaa sheegay in Wadaniyadda aanay aheyn kaliya in Soomaali la yahay, balse waddaniyada ay tahay wax intaas ka weyn, isla markaana ay muhiim tahay in wax laga barto dadkii ka horeeyay sida ay ugu guuleysteen in dadka Soomaaliyeed ay mideeyaan.
“Xorriyadda aan maanta ku naalooneyno waa mid lagu soo bixiyay dhiig iyo dhaqaale. Maanta waxaan joognaa guul taasoo kasoo bilaabatay 1960kii markii ay waqooyi iyo koonfur isku darsameen. Guushaas waxay ahayd mid ummadda u horseeday Soomaalinimo iyo midnimo”ayuu yiri Madaxweyne Farmaajo.
Hadalka madaxweyne Farmaajo ayaa Saacadihii la soo dhaafay waxa uu ahaa mid qabsaday Baraha Bulshada,isla markaana ay jawaabo kala duwan Shacabku ka bixinayeen.
Halkaan hoose ka dhageyso hadalka Madaxweyne Farmaajo